Waa rasmi: Disney + waxay imaan doontaa Spain 31ka Maarso, 2020 | Wararka IPhone
Bishii Nofeembar 12, adeegga fiidiyowga ee 'Disney', Disney + ayaa si rasmi ah uga soo muuqan doonta Mareykanka iyo Nederland. Sida shirkaddu ku dhawaaqday, bilooyinku markay socdaan, adeeggan cusub ee fiidiyoowga ah ee fiidiyoowga ah ayaa ku sii fidi doona dalal badan.
Mar Apple TV + Waxaa horeyba looga heli karaa Spain, kuwa soo socda ee imaan doona waxay noqon doonaan Disney +, oo barteeda Twitter-ka ku shaaciyay taariikhda ay sameyn doonto: 31 Maarso 2020. Spain ka sokow, waxay sidoo kale gaari doontaa Boqortooyada Ingiriiska, Jarmalka, Faransiiska iyo Talyaaniga.
Hada lagu dhawaaqay: #DisneyPlus waxaa laga heli doonaa Boqortooyada Ingiriiska, Jarmalka, Faransiiska, Talyaaniga, Isbaanish (iyo inbadan oo dhowaan lagu dhawaaqi doono) laga bilaabo Maarso 31. Fadlan ogow: Cinwaanadu way ku kala duwanaan karaan dhul ahaan. pic.twitter.com/lE6nzBeaXy
- Disney + (@dhimbiil) November 7, 2019
Sida Netflix, buugga laga heli karo ee Disney + wuu ku kala duwanaan doonaa waddan ahaan, sidaa darteed ma heli doonno cinwaano isku mid ah oo laga heli karo Mareykanka sida kuwa aan ka heli doonno Spain ama waddamada kale ee Yurub, maxaa yeelay wax walba waxay ku xiran yihiin heshiisyada hadda jira ee shirkadda weyn ee Disney noqotay, ay timid sannadihii la soo dhaafay. oo leh adeegyo fiidiyoow oo kala duwan.
Sida loo maleynayo, qiimaha adeeggan Spain, waxay lamid noqon doontaa Nederland, 6,99 euro bishii y sida Apple TV + oo kale, waxaan awoodi doonnaa inaan qandaraas ku galino hal sano oo adeeg ah ka hor 69,99 euro, oo naga badbaadinaysa laba bilood oo rukun ah.
Qalabka Disney + ee u dhigma
Maaddaama Bob Iger, oo ah agaasimaha Disney, uu ku dhawaaqay inta lagu gudajiray soo bandhigida adeegga fiidiyowga ee 'Disney', Tan waxaa laga heli doonaa labada TV ee Apple iyo aaladaha kale ee ay maamusho iOS Iyadoo loo marayo codsi u dhigma, codsi gaari doona App Store dhowr maalmood ka hor bilaabitaankiisa.
Intaa waxaa sii dheer, waxaa sidoo kale laga heli doonaa labada Xbox ee Microsoft iyo Sony ee PlayStation 4, qalabka Roku iyo Ulaha Amazon ee Dabka. Xilligan taariikhda la bilaabayo ee Latin America lama yaqaan, laakiin Disney + waxay nagu martiqaadeysaa inaan la socono si aan u aragno wadamada soo socda halkaasoo adeeggeeda fiidiyowga ee qulqulka leh laga heli doono.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » Waa rasmi: Disney + waxay imaan doontaa Spain 31ka Maarso, 2020